Etu esi ebipụta isiokwu nke ọnọdụ na Linkedin | ECommerce ozi ọma
Etu esi ebipụta isiokwu na-etinye onwe gị na Linkedin
Encarni Arcoya | | Ahịa azụmahịa
Linkedin, ma ọ bụ Linkedln, ọ ghọrọ onye na-ewu ewu ọkachamara na-elekọta mmadụ na netwọk. N'ime ya ị nwere ike ọ bụghị naanị ijikọ ndị ọzọ, ị nwekwara ike iwetara profaịlụ ọkachamara gị na ndị ọchụnta ego, freelancers, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụdị ndị ga-achọpụta gị. Mana iji nweta ezigbo nsonaazụ ndị a, ị ga-amarịrị ka esi ebipụta na Linkedin. Ma ọ dịghị mfe dịka ọ dị.
Ọ bụrụ n’ị tụlekwara na ọtụtụ ndị na - ejizi ya arụ ọrụ, ikwupụta akwụkwọ gị adịghị mfe. Ya mere, mụta ụfọdụ aghụghọ na otu esi etinye na Linkedin Na na ha na-adọta uche, ma ọ bụ na ha edobere, nwere ike ịbụ ụzọ maka profaịlụ gị ịga n'ihu. You chọrọ ịma igodo?
1 Kedu ụdị netwọk mmekọrịta bụ Linkedln
2 Dị mbipụta ndị na-aga nke ọma na Linkedln
3 Ndụmọdụ otu esi etinye na Linkedin ma mee ka ọ gaa nke ọma
3.1 Etu esi biputere na Linkedin na Pulse ngalaba
Kedu ụdị netwọk mmekọrịta bụ Linkedln
Nke mbụ, ị kwesịrị ịmara na Linkedin bụ netwọkụ mmekọrịta ọkachamara. Kedu ihe nke ahụ pụtara? Ọfọn, enweghị ohere maka vidiyo "nzuzu", ma ọ bụ mbipụta dịka nke emere na Facebook ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ ebe ebumnuche ndị ọzọ meriri. N'ebe a, anyị na-achọ ịmepụta profaịlụ ọkachamara na nke dị oke njọ.
Biko mara nke ahụ ọ dịka ọ bụ mmalite nke ntanetị gị. N'ezie, profaịlụ gị bụ nke ahụ. N'ime ya ị ga-egosipụta ọzụzụ gị, ahụmịhe gị, nka gị, mmezu gị ... yana mgbe ọ bụla gbasara ọrụ, ọ bụghị nke onwe gị (ọ bụ ezie na ịnwere ike itinye ha ma ọ bụrụ na ha metụtara nka ọrụ)
Ugbu a, netwọk a anaghị akwụsị na otu ibe iji gosipụta mmalite gị. I nwekwara ike isonye ma biputere edemede, nkọwa, onyonyo, vidiyo ... mana ọ bụrụhaala na ha metụtara ọrụ gị yana akụkụ ọrụ gị. Dịka ọmụmaatụ, vidiyo banyere pusi gị nwere ike ọ gaghị abụ ihe ị ga-etinye na profaịlụ Linkedin gị. Kama, otu esi arụpụta ọrụ ga-aka mma.
Dị mbipụta ndị na-aga nke ọma na Linkedln
Dịka ọ dị na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ, na Linkedin enwere ọdịnaya ụfọdụ mgbe niile nwere ohere ka mma ịga nke ọma karịa ndị ọzọ. Ma abia na imata otu esi edebanye na Linkedin iji dozie onwe gi, odi nkpa obughi nani imata uzo di iche iche, kamakwa iji ha mee ihe.
Kpọmkwem, ị nwere:
Gị blog posts. Ọ bụrụ na ị nwere, ma taa enwere ole na ole na-enweghị, ị kwesịrị iwepụta oge iji dee edemede na ya ma, emesịa, nyefee ha na Linkedin iji mee ka ha mara. N’ezie, gbaa mbọ hụ na edere ya nke ọma na ọ bụkwa isiokwu ị chọrọ ka ndị mmadụ jiri mara gị.
Akụkọ ụlọ ọrụ. Were ya na ị na-arụ ọrụ dịka ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ, na ihe ọhụrụ apụtawo iji gwọọ ọrịa kansa na nkịta. Ọfọn, ozi ahụ ga-amasị gị na Linkedin ebe ọ bụ na, dịka ọkachamara n'ọgwụ anụmanụ, ị ga-enye ozi bara uru. Ọ baghị uru na ị deeghị ya; Na mbu, e chere na ịkesa ọdịnaya ndị ọzọ adịghị mma maka na ị nyere ndị na-ege ntị n'asọmpi gị; ugbu a na nke a abụghị ya, ma ọ na-enye gị ihe ịtụkwasị obi.
Ihe eji eme ihe. Ga n'ihu na ihe atụ gara aga, site na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ. Ọ bụrụ na idenye post ma ọ bụ vidiyo nke ị na-akụziri ndị mmadụ etu esi ewepụ akọrọ? Ihe ndị a na-akpọ "how to" na-eto nke ukwuu ma ọ bụrụ na emechara nke ọma, ha nwere ike ịpụ iche na ndị ọzọ.
Atụmatụ. O yiri nke a dị n'elu, ọ bụ ezie na ọ gaghị adị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, yana nke dị n'elu, ị nwere ike inye ndụmọdụ iji lekọta nkịta n'oge oyi. N'ebe a, anyị nwekwara ike ịgụnye ozi na-akpali akpali, ma ọ bụ ndị na-agwa ahụmịhe na n'ikpeazụ gbalịa inyere ndị ọrụ ndị ọzọ aka na-eche otu ọnọdụ ahụ na ha.
Foto na vidiyo. Foto, infographics, ndịna eserese, vidiyo ... ihe niile "anya" ga-enyere aka na mbipụta ndị ahụ. N’ezie, a na-etinye ihe odide ndị a na akụkụ mmụta na-akụzi ma ọ bụ na-enye nkọwa site na iji ihe oyiyi ndị a eme ka ha nwekwuo nghọta.
Mmelite. N'ikpeazụ, ịnara usoro, ịnwe ọrụ ọhụụ ... ọ nwekwara ike ịbụ ihe ị ga-etinye na Linkedin n'ihi na ọ ga-egosi gị na-arụsi ọrụ ike na netwọkụ ahụ, mana ọ ga-ewetakwa agụụ gị ịme ọrụ kachasị mma ma nwee nke kachasị mma enwere ike inweta ọzụzụ.
Ndụmọdụ otu esi etinye na Linkedin ma mee ka ọ gaa nke ọma
N'ikpeazụ, anyị ga-atụle gị igodo maka etu esi ebipụta isiokwu ndị ga-edobe na Linkedin. Iji malite, ị ga-eburu n'uche akụkụ ụfọdụ dị ka:
Nkọwapụta gị kwesịrị ịbụ nke zuru oke. Nkọwapụta ezughi oke agaghị enye gị ezigbo onyonyo yana ọbụlagodi na ederede gị ma ọ bụ mbipụta gị dị mma, mgbe ha matara karịa gị ma chọta "oghere", ọ ga-ahapụ gị n'ọnọdụ ọjọọ.
Jiri onyonyo dị elu. Ọ bụghị naanị nke ahụ, kamakwa na ha na-adọrọ mmasị, na ha na-adọta uche, ha mara mma ma bụrụ ndị ahaziri iche.
Nwee ezigbo njikọ. O doro anya, ọ dịghị onye na-amalite site na 5000 ndị ejikọtara, mana ịkwesịrị ịnwe ọnụ ọgụgụ maka posts gị ka ọ pụta. A na-enwetakwa nke ahụ site na ndidi, nnọgidesi ike na-arụ ọrụ yana kwa ụbọchị.
Ziga. Ọ bụ ihe kacha elu. Na Linkedin, ọ bụghị maka ị na-emefu ụbọchị niile, mana ọ bụ kwa ụbọchị. Maka na ụzọ ahụ, ha ga-ahụ na ị na-eche banyere ịdebe ya n'ọrụ na ịnye ọdịnaya na-atọ ụtọ (ma dịgasị iche).
Jiri SEO. I chere na ọnweghị SEO na Linkedin? Ọfọn ọ bụghị eziokwu. Igodo nke SEO na netwọkụ a dị mkpa ma nwee ike inyere gị aka nweta ozi Linkedin gị n'aka ndị ọrụ ziri ezi.
Etu esi biputere na Linkedin na Pulse ngalaba
Pulse bụ ngwa ọrụ mmadụ ole ma ole maara. Ma n'agbanyeghị nke ahụ, ọ nwere ike meghere gị ọtụtụ ụzọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ihe ị dere dị mma nke na ndị na-elekọta mmadụ na-ahụ gị.
Kedu ihe bụ Pulse? Ọ bụ ụzọ i nwere nke mere na, Dịka onye ọrụ Linkedin, dee edemede nke gị na netwọkụ mmekọrịta ma kesaa ya ọ bụghị naanị na ndị kọntaktị gị, kamakwa ndị obodo niile.. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Linkedin na-enye gị ohere iji gosipụta ihe ọmụma ọkachamara gị iji mee ka a mara gị. N’ezie, ị ga-ewepụta ikike ma mee ka aha gị bụrụ nke a ma ama.
Ighagara ihe mgbe nile na Pulse ga - enyere gị aka imere onwe gị aha. Ọbụghị naanị nke ahụ, ọ bụrụ na mbipụta gị dị mma, ma gosipụta ezigbo ederede, yana ihe ọmụma na ngalaba ahụ, ị ​​nwere ike ịdọta uche ndị ọzọ chọrọ ọkachamara dị ka gị. Ọbụna na Linkedin n'onwe ya ebe ọ bụ na e nwere "ndị na-eme ihe ike" na ntanetị ndị nwere ọhụụ ka ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ahịa azụmahịa » Etu esi ebipụta isiokwu na-etinye onwe gị na Linkedin
Etu esi etolite na Instagram
Ihe ịmara banyere ahịa influencer